समर सधैं समुद्र, सूर्य र निस्सन्देही, एक सुन्दर गोल्डन ट्यान संग सम्बन्धित छ। पराबैंगनी को प्रशंसक सनबर्न को लागि सबै भन्दा राम्रो र नयाँ माध्यम को उपयोग गर्दछ। समुद्री किनारमा, धेरै शरीरलाई यथासंभव नदिने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि लुगामा छालाको कुनै सेतो प्याचहरू छैनन्। एक आदर्श पुरा तरिकाले पनि टेनिंग प्राप्त गर्न मोडेलहरु को एक सरणी मा बदल दिए छ, जहां केहि मिनेट मा छाला सूर्यबर्न, आकर्षक देखो मिल जाएगा।
पराबैंगनी अन्तर्गत लामो समयको लागि, धेरैले सोच्न, के यो सुरक्षित छ? अधिकांशका लागि मात्र मुद्दाको सौंदर्य पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। सूर्यमा रहन, निस्सन्देह, शरीरको अवस्थालाई सकारात्मक असर पार्छ। यसको प्रभावको अधीन, भिटामिन डी को गठन र गठित गरिएको छ, जुन एक व्यक्ति को लागि आवश्यक छ। तर याद गर्नुहोस् कि सबमिशनमा सबै राम्रो छ।
वैज्ञानिस्टहरूले अध्ययन गरेका छन् जसमा उनीहरूले पाया कि अवसादको सम्भावना, धूप मौसममा खराब मूड कम से कम हुन्छ, किनकि पराबैंगनीले आनन्दको हार्मोन उत्पादन गर्न र शरीरको सुरक्षात्मक कार्यलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। तथापि, केही अवस्थामा, सौर चिकित्सा स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुन सक्छ। पराबैंगनीको लागि अनियन्त्रित जोखिम धूप, अपमानजनक ट्यूमरहरू, छालाको समय भन्दा पहिलेको उमेर, एलर्जी प्रतिक्रियाहरूको विकास हुन सक्छ। साथै, सूर्यको लामो समयसम्म देखापरेपछि, एक घटनाले सेतो धब्बाको रातो छाला जस्तै देखा पर्न सक्छ। यस दोषको कारण के हो र कसरी उठेको कमीलाई समाप्त गर्ने, के आजको लेखमा कुरा गरौं।
सनबर्न को प्रभाव - छाला मा स्पॉट
कहिलेकाहीँ सूर्यबर्न पछि एक व्यक्तिले छालामा सेतो दाग छ भनेर देखाउँछ। यो अनुहारको अनौठो लागी देखिन्छ, छालाका हल्का क्षेत्रहरू लुकाउन समेत भित्तामा सधैं काम गर्दैन। भविष्यमा यस्तो समस्याको घटनालाई रोक्न, तपाइँलाई जान्न आवश्यक छ किन सेतो स्पटहरूमा छाला देखा पर्दछ र यो गल्तीको घटनालाई कसरी रोक्न।
प्राय: प्राय: स्पेसमा सेतो स्पटहरू देखा पर्दा यदि शरीरमा फंगुल संक्रमण हुन्छ। धेरैजना मानिसहरू पनि उनीहरूको अनुहार खारेज गर्दैनन् भन्ने थाहा छैन। यो अवस्थामा छालामा सेतो स्पट रोगको एक मात्र लक्षण हो। सुरुमा, खुट्टा र छालाको थोपा पछाडी छ। त्यसपछि त्यहाँ छालाको मा सेतो धब्बाहरू (तन मा)। यसको कारण शरीरको उच्च तापमान वा उच्च नमीको असहिरो हुन सक्छ। स्वस्थ छालाका कक्षहरूमा सूर्यको रोशनीको प्रभावमा, मेलानिन उत्पादन गरिन्छ र कोशिकाहरूसँग संक्रमित कोशिकाहरू हल्का हुन्छन्, किनभने तिनीहरूले सूर्यलाइटलाई प्रसारण गर्दैनन्। स्वतन्त्र रूपमा बेपत्ता पारिएको वा पास छैन, डाक्टरको सन्दर्भ जरूरी।
निस्सन्देह, यो पत्ता लगाउन सजिलो छ किन सेतो स्पट हुन्छ। यसैले यदि दोष फेला पर्यो भने, यसलाई दैर्मेटोलोजिस्टसँग सम्पर्क गर्न सिफारिस गरिन्छ। फगलग संक्रमण विभिन्न अनुचित कारकहरु को कारण विकसित हुन सक्छ: तनाव, केहि दबाइहरु को लामो समय सम्म कांट, छाला को अम्लता र धेरै अन्य को स्तर मा परिवर्तन।
भिटाइगोको रोग पनि सेतो धब्बे को उपस्थिति देखि प्रकट हुन्छ। यस अवस्थामा, सेतो स्पट प्रायः प्रायः हात र अनुहारमा देखा पर्दछ। विटिलिगो हो, बरु एक रोग छैन, त्यसैले शरीरले कुनै पनि अंगहरूको गम्भीर रोगहरूको बारे चेतावनी दिन्छ। तंत्रिका तंत्रमा एक विच्छेद र विषाक्तताले शरीरले सेतो स्पेसको उपस्थितिलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, एक विशेषज्ञ बिना परामर्श बिना कुनै गर्न सक्दैन। पूर्ण परीक्षा पछि, डाक्टरले एक सटीक निदान स्थापित गर्नेछ र उपयुक्त उपचारको वर्णन गर्नेछ।
आज सबैभन्दा धेरै रहस्यमय रोगहरू psoriasis हो, यसको कारण बिल्कुल स्थापित छैन। एक व्यक्ति को स्वास्थ्य मा एक बीमारी को कुनै महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव छैन, केवल एक क्षण एक मजबूत मनोवैज्ञानिक असुविधा हो। Psoriasis को लक्षण छाला मा रातो र सेतो धब्बा छन्, अझ ठीक छ, यो सेतो स्केलहरु संग रातो धब्बे हो कि कहिले काँही खुट्टा। यस्तो स्थानहरू "psoriasis प्लाजाज" भनिन्छ, तिनीहरू आकारमा साना हुन्छन् र शरीरको कुनै पनि क्षेत्रमा समूहमा व्यवस्थित हुन्छन्। धब्बा घना, नरम सतह, लगातार फ्लाकिङ छ। रोग संक्रामक छैन, तर यो उपचार निकै गाह्रो छ।
मिल्तानिनको उत्पादन कम गर्न आनुवंशिक रूपमा राख्न सकिन्छ, सूर्यको लामो समयसम्मको जोखिमले अप्रिय र अपमानजनक परिणामहरू उत्प्रेरित गर्न सक्छ। यस अवस्थामा सूर्यबर्न पछि व्हाइट स्पट हटाइनेछैन। हिपोमिल्यानिसिस उपचारले आफैलाई उपचार गर्न उधारो गर्दैन, यसैले, सडकमा बाहिर जान अघि, यो हात, अनुहार, अनुहारको छालामा सुरक्षात्मक क्रीम लागू गर्न बिल्कुल आवश्यक छ।
केहि दबाइहरु को प्रभाव को तहत, छाला पराबैंगनी प्रकाश को लागि कमजोर हुन सक्छ र सूर्य पछि छाला को तहत सफेद धब्बे दिखाई दि्छ। यसकारण, औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले, तपाइँसँग संलग्न निर्देशनहरू सावधानीपूर्वक पढ्नै पर्छ। यस्तो परिणाम, नियमको रूपमा, विनाशकारी सूचीमा सूचित गरिएको छ।
क्षैतिज सौरवमम भ्रमण गर्दै, सावधानीको बारेमा पनि नबिर्सनुहोस्। उदाहरणका लागि, छालामा (स्पिनमा) मा सेतो स्पट हुन सक्छ यदि प्रक्रियाको बेलामा अत्यन्तै शरीरको स्थिति परिवर्तन गर्दछ। शरीरको साइटमा रगतको बहाव, जुन अधिक तीव्र विक्रयको अधीनमा रहेको छ, निकै कम हुन्छ। यो पोलोस र कोलाहरूमा यो छालाको लागि अधिक संवेदनशील छ।
सुरक्षित सनबर्न, वा छालामा सेतो धब्बेको घटनालाई कसरी रोक्न
अनुहारमा सेतो प्याच नहुने क्रममा, केही निश्चित नियमहरूको पालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। दोपहरमा, पराबैंगनी विकिरण सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा खतरनाक छ। 12.00 देखि 13.00 सम्म - जब समय उच्च संभावना संग सनबर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अवधिको समयमा यो सूर्यमा रहन सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ, यसले तपाईंको छालालाई सूर्यलाइटको आक्रामक असरबाट जोगाउँछ । यदि यस समयमा सडकमा बस्नका लागि अझै पनि आवश्यक छ भने, हेड्रे्रेस प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। सूर्यको रातको लागि सबैभन्दा अनुकूल समय - 11.00 र 16.00 पछि।
यस मामला मा पोशाक पनि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। सूर्यलाइटको प्रभाव घटाउनुहोस् घने ऊतक सक्षम छ। प्राकृतिक सामग्री (कपास, कपास, र यति मा बनाइएका) उत्पादनहरू उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिइएको छ। सिंथेटिक कपडेबाट बनाईएको लुगामा यो नुहाउने मात्र हुनेछ, तर एलर्जी प्रतिक्रियाको विकासको ठूलो खतरा हो।
यो सिफारिश गरिएको छ कि 20 मिनेट भन्दा बढी प्रत्यक्ष सूर्यलाइटको अधीनमा रहन, यो समय पनि ट्यान प्राप्त गर्न पर्याप्त छ।
सनस्क्रीनको बारेमा नबिर्सनुहोस्। तिनीहरूको प्रयोग जलविद्युतको प्रतिरोध गर्दछ, जुन छालाको लागि खतरनाक हुन्छ।
सेतो स्पेस कसरी हटाउने?
दुर्भाग्यवश, तपाईं सधैँ सेतो स्पेसबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि तिनीहरूको औषधि औषधि लिने सम्बद्ध छ भने, तपाइँ औषधीहरू थप उपयुक्त व्यक्तिहरूसँग बदल्न सक्नुहुन्छ। यदि कारण लचिन्छ भने, विशेष एन्टिफुगल ड्रग्स लागू गर्नुहोस् - "ललिजिल", "माइफुंगार", "क्लोट्रिमेजोल", यस्तो औषधि मात्र डाक्टर हुनु पर्छ, जसले रोगीको व्यक्तिगत विशेषताहरू लिन्छ। उपचारको अवधि लगभग2हप्ता हुन्छ।
विटिलिगोले विशेषज्ञलाई परामर्श गर्नुपर्दछ र एक व्यापक मेडिकल परीक्षाबाट जोगिनै पर्छ। यस अवस्थामा कारण केही भिटामिनहरूको घाटा हुन सक्छ, आन्तरिक अङ्गहरूको प्रकार्यको उल्लङ्घन र त्यसमा।
घरमा, तपाईं यस्तो अप्रिय घटनाको साथ लड्न सक्नुहुन्छ। एउटै छाला रङको लागि, यो हट नहाने लिन सिफारिस गरिन्छ। स्नानको लागि एक हार्ड लुफे प्रयोग गर्दछ जुन एपिडर्मिसको माथिल्लो तहलाई स्पष्ट पार्दछ। छालाको रंग पनि प्राप्त गर्न को लागी नरम स्क्रब र जीले मद्दत गर्नेछ। असिन तनबाट मुक्त गर्न को लागी फोटो थेरेपी या लेजर को मदद संग हुन सक्छ। यद्यपि यस्तो प्रक्रियाहरू निकै महँगो हुन्छन्।
पराबैंगनी लाइट फूड्स र पेय पदार्थहरु को प्रभाव कम गर्नुहोस जो एंटीओक्सिडेंट मा अमीर हो। उनीहरूको प्रभाव अन्तर्गत क्यान्सरहरूको घटनाको सम्भाव्यता घट्छ र छालाको उमेरको प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। यसमा गाजर, टमाटर, अंगूर, कद्दू, फैटी माछा, हरियो चिया समावेश गर्दछ।
यदि समस्या बच्चामा भएको छ भने
छालामा (हिउँमा) मा सेतो धब्बा बच्चा मा हुन सक्छ। यसका लागि कारण अत्यधिक ट्याङ्किङ हुन सक्छ, रंगीन लचिन, भिट्रिगोको रूप। यो घटना उत्पन्न हुन सक्छ र हाइमोमेल्यानोसिसको रूपमा यस्तो बच्चाको रोगको परिणामस्वरूप यो निकै गाह्रो हुन्छ। यो नियमको रूपमा, नियमको रूपमा, तीव्र रूपको संक्रामक रोगहरूले, तंत्रिका तंत्रलाई असर पार्छ र बच्चाको विकासमा ढिलाइ साबित गर्दछ। थेरेपीले औषधि र कस्मेटिक प्रक्रियाहरू प्रयोग गरेको छ।
यसको अतिरिक्त, बच्चाहरु मा छाला (सनटान) मा सफेद वयस र वयस्कों मा सफेद स्पॉट तब भी हुन सक्छ जब सूर्य को प्रदर्शन को नियमहरु लाई मनाईएको छैन। केहि अवस्थामा, यस घटनाले छालाको मा सनस्क्रीनको असामान्य वितरणको कारण हुनसक्छ, छालाका ती क्षेत्रहरूमा स्पेस जहाँ कस्मेटिक एजेन्ट धेरै अधिक थियो।
सूर्यको हानिकारक र आक्रामक प्रभावहरूलाई कम गर्न सजिलो छैन। यो गर्नका लागि, माथिको सिफारिसहरू पछ्याउनुहोस्। यो लेखबाट सल्लाह पालन गर्दै, तपाईं शरीरको लागि अप्रिय नतिजा बिना सुन्दर र पनि तन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
उहाँले आफ्ना खुट्टाहरू बदल्नुहुन्छ। उपचारको कारणहरू र तरिकाहरू।
महिलाहरु मा गर्भ मा खुजली को कारणहरु। गुनासो को लाडो र खुट्टा
श्वास मधुमेह के हो?
भ्वाईस साईट: छिटो पुनःप्राप्तिको लागि के गर्ने
कसरी एक मानिस चकित
मेरिना Stepnova: जीवनी, रचनात्मकता, समीक्षा
जापानी फूल (तस्विर)। जापानी बगैचामा फूल फूलन "कावा फौजी"। जापानी फूल पार्क "अशिकागा"
पाण्डा पाजामा - उत्कृष्ट रातहरु को लागि महान